I-bamboo lemur ibulawa yindlala ngenxa yokuguquka kwesimo sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
El uqalo lemur, ogama lakhe lesayensi ngu I-prolemur simus, inyamazane ephila ngokwemvelo eningizimu-mpumalanga yeMadagascar. Luhlobo olunobuso obumnandi kakhulu nokubukeka, olunezindlebe ezimhlophe noboya obumpunga, obusengozini enkulu yokuqothulwa, hhayi kuphela ngenxa yokulahleka kwendawo yokuhlala kanye nokuba yisisulu sokushushumbiswa kwezilwane ngokungemthetho, kepha futhi ngoba ukudla kwabo okuyinhloko, uqalo, kubulawa ukungabi namanzi.
Ngakho-ke, ukuguquka kwesimo sezulu kungesinye sezizathu eziyinhloko zokuthi kungani i-bamboo lemur kungenzeka angakuboni ukukhanya kwekhulu elisha.
Isimo sezulu sithinta izitshalo, futhi kanjalo nezilwane ezizidlayo. I-bamboo lemur iphakela cishe uqalo kuphela, kepha ngenxa yokushoda kwezimvula ezijwayelekile azisenamsoco noma zimnandi, njengoba kuvezwe ngu- ukutadisha eshicilelwe kumagazini i-Current Biology.
Lo mbhalo, olungiselelwe yiqembu labacwaningi abavela e-Australia, e-United States, eFinland naseMadagascar, uyakuchaza lokho Lezi zinkawu kufanele zivumelane nesimo esomile, futhi ukuze ziphile futhi seziqalile nokudla isiqu sokhuni ngoqalo esikhundleni samahlumela athambile futhi anomsoco.
Njengoba isikhathi semvula sibambezelekile isikhathi esingangezinyanga ezintathu, zombili izitshalo nezilwane zaseMagadascar ziphoqeleka ukuba zivumelane nemvelo ezingazi kangako ngazo. Ngakho-ke, ama-bamboo lemurs athuthukisa amazinyo ayinkimbinkimbi futhi akhethekile ukuze akwazi ukufaka umhlanga. Kepha ukuguquguquka kwesimo sezulu kuyashesha: inani labantu liyancipha.
Okudabukisayo ukuthi akuwona ama-lemurs kuphela akulesi simo, kepha futhi kunamabhere epanda e-Asia, nawo adla uqalo.
Ngaphandle kokuthi kwenziwe okuthile ukukuvimbela, zombili lezi zilwane cishe zizophela ngokushesha kunokuba besicabanga.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » I-bamboo lemur ibulawa yindlala ngenxa yokushintsha kwesimo sezulu